ULuis Eduardo Montás “Walwa Njengengonyama” | Incwadi Yonyaka Ka-2015
ULuis Eduardo Montás
IBALI LOBOMI Wayeligosa kumbutho wezopolitiko kaRafael Trujillo. Wafunda iBhayibhile waza wakhonza uYehova ngokuthembeka de wafa ngo-2000.
ULUIS, owayezalana noTrujillo, wayengunongxowa weqela lezopolitiko iPartido Dominicano (iQela LaseDominican). Noko ke, indlela awayelawula ngayo uTrujillo yayinuk’ umzondo kuLuis ibe nangona wazama izihlandlo eziliqela ukwehla esikhundleni sakhe, lo zwilakhe akazange amvumele.
Xa uTrujillo wabulala oobhuti bakaLuis ababini, uLuis wazama kwada kwakabini ukumcim’ igama. Kodwa ke akazange ashiye mkhondo kuloo malinge akhe okubulala lo zwilakhe. ULuis wada waya nasemagqirheni ezama ukubulala le ndoda, awathi ngayo: “Wayenjengerhamncwa elalicinga ukuba likhulu kumntu wonke.” Phezu kwetafile kwindlu yelinye igqirha awayeye kulo, wabona incwadi ethi “The Truth Shall Make You Free” waza wayifunda. Wayithanda kakhulu le ncwadi waza wagoduka nayo, emva kokuba eyifundile wabona ukuba le yinyaniso ebekade eyifuna.
Xa uLuis waya eCiudad Trujillo, waya kwintlanganiso yamaNgqina kaYehova waza wafumana iincwadi neemagazini eziliqela. Wazifunda ubusuku bonke waza kamva wacela ukuqhutyelwa isifundo seBhayibhile. Njengoko wayeqhubeka efundelwa, uLuis wagqiba kwelokuba ohlukane nolawulo lukaTrujillo. Xa lo zwilakhe wakuvayo oko, wathembisa uLuis ngesikhundla esiphezulu sokuba ngunozakuzaku waseDominican ePuerto Rico. Kodwa uLuis akazange asamkele eso sikhundla, nangona wayesazi ukuba oko kwakunokumenza atshutshiswe.
ULuis uthi, “Ndaphatheka kakubi ngeyona ndlela, urhulumente wayendiloba ngazo zonke iindlela. Kodwa ndandizimisele ukwahlukana nezinto zeli hlabathi.” ULuis waba ngumvakalisi othetha phandle, kangangokuba nabefundisi becawa yamaKatolika bambiza ngokuba “ngumshumayeli.” Ngo-Oktobha 5, 1947, kwiinyanga ezintandathu kamva, emva kokuba eqalisile ukuya ezintlanganisweni, wabhaptizwa.
Emva kokuba ebhaptiziwe, uLuis wazingelwa okwenyamakazi, waza wavalelwa esiseleni yedwa. Bakha bazama nokumbulala amatyeli aliqela. Sekunjalo, qho ebanjwa aze asiwe enkundleni, wayesebenzisa elo thuba ukuze ashumayele. ULuis wathi: “Ndalwa njengengonyama ndithethelela ukholo lwam, ibe ndisancuma xa ndicinga ngaloo maxesha.”
Abantu bakubona ukunyaniseka kukaLuis njengoko wayekhonza uThixo. Ngo-1994, iphephandaba laseDominican i-El Siglo lathi ngoLuis: “UMnumzana Luis Eduardo Montás waziwa kweli laseSan Cristobal ngokuba yindoda ezimiseleyo. Yindod’ emadodeni, unovelwano kwaye uzolile. Yonke into esiyaziyo ngaye kwimbali yaseSan Cristobal inento yokwenza nomsebenzi wakhe wokuba ngumKristu.”